Filipina nanambara ny nosy Volkano Taal ho 'tanin'olona'
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Filipina nanambara ny nosy Volkano Taal ho 'tanin'olona'
The Masoivoho volokano Filipina efa ela no nanambara ny nosy Luzon ho “faritra mampidi-doza maharitra”, kanefa efa nipetraka sy niasa tao nandritra ny am-polony taona ny mponina. Mangataka ny hanamafisana ny lalàna ankehitriny ny tompon'andraikitra ary hamafisina amin'ny fomba henjana kokoa.
Nanaiky ny drafitra hanambarana ny nosy Luzon, ny filoha Filipina, Rodrigo Duterte Volkano Taal, 'tanin'olona', mamarana amin'ny fomba mahomby ny fahafahan'ny mponina teo aloha niverina tamin'ny fiainany tany.
Mbola tsy namoaka didim-panjakana ofisialy momba izany i Duterte.
Ny sarin'i Drone izay nalaina sary tamin'ny asabotsy dia mampiseho ny nosy iray manontolo ary saika ny zava-drehetra eo amboniny, manomboka amin'ny trano sy fiara nafoy ka hatrany amin'ny zavamaniry, samy voasarona anaty lamba firakotra matevina avokoa.
Mandritra izany fotoana izany, ny sekretera ny Atitany Eduardo Ano dia niasa tamin'ny tompon'andraikitra eo an-toerana amin'ny famolavolana drafitra famindran-toerana ho an'ireo mponina nafindra toerana. Nangataka tranokala telo hektara izy mba hanarenana trano sahabo ho 6,000 fianakaviana izay nafindra toerana hiala ny nosy. Ny tranokala dia tokony ho 17 kilaometatra lavitra indrindra miala ny volkano ho fiarovana ny mponina.
“Nipetraka teo amin'ilay volkano izy ireo niaraka tamin'ny crater 47. Tena mampidi-doza izany. Toy ny manana basy manondro anao io, ”hoy i Renato Solidum, lehiben'ny andrim-panjakan'ny volkano.
Ny Volkano Taal dia mijanona eo amin'ny ambaratonga faharoa amin'ny fandrahonana avo indrindra, hatramin'ny nanombohany nipoaka tamin'ny 12 Janoary, izay manondro loza mananontanona, horohoron-tany mitohy, ary karazana famantarana fa mbola miakatra ny magma ao amin'ny efitrano volkano.
Tsy nisy ny fahafatesan'olom-bitsy nolazaina mivantana tamin'iny fipoahana iny, na dia olona an-jatony maro aza no notsaboina noho ny fahasahiranana mifoka rivotra.
Phivolcs, maso ivoho manara-maso ny horohorontany, volkano ary tsunami, dia nanoratra horohoron-tany 12 farafahakeliny tao anatin'ny 12 ora ny alatsinainy teo.